Fri, Jun 5, 2020 at 9:16pm
डडेल्धुरामा १० दिने एकिकृत स्वास्थ्य शिविर, ३ हजारको स्वास्थ्य परीक्षण
डडेल्धुरा, ४ फागुन । नवदुर्गा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको १० दिने एकिकृत स्वास्थ्य शिविरमा तीन हजार २०७ विभिन्न किसिमका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । नवदुर्गा गाउँपालिकाको आयोजनामा गाउँपालिकाको पाँचवटै वडामा सञ्चालन भएको उक्त एकिकृत स्वास्थ्य शिविरमा दाँत, आँखा, पाठेघर लगायतका बिरामीको उपचार गरिएको थियो । गत माघ २१ गतेदेखि सञ्चालन भएको सो स्वास्थ्य शिविरमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एक हजार ९२९, पाठेघर सम्बन्धी चेकजाँच..
के तपाई दाँत कोट्याउन सिन्काको प्रयोग गर्नु हुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने अब तुरुन्त छोडिहाल्नुस् !
बुधबार, फागुन २, २०७४ साल
एजेन्सी, काठमाडौं, फागुन २ । अवस्य नै कुनै पनि चिज खाइसकेपछि दाँतमा अड्किएको खाने कुरा कोट्याएर फाल्न हामी मध्ये कतिपयले सिन्का अर्थात टुथपिक प्रयोग गर्ने गर्छौं । तर, यसले हामीलाई के असर पुर्याइरहेको छ भन्ने थाहा पाएका हुँदैनौं । यसको असरबारे जानिराख्दा राम्रो हुन्छ ! – दाँतमा फसेको खाने कुरा निकाल्न खोज्दा सिन्का अन्जानमा गिजामा लाग्छ । जसले गर्दा रगत आउन थाल्छ र..
मुलुकभरका २८ अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनका लागि साढे ४ करोडको बजेट प्रस्ताव
काठमाडौं, फागुन २ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका २८ वटा अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनका लागि करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल लगायतका २८ अस्पतालहरुलाई फार्मेसी सञ्चालनका यस आर्थिक वर्षका लागि २८ करोड रुपैया बजेट प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित अस्पतालमध्य करिब २३ वटा अस्पतालहरुले..
अभियान मास्कमाण्डु : प्रेम दिवसमा आफ्नो फोक्सोलाई माया गर्न आग्रह
काठमाडौँ, २ फागुन वायु प्रदूषणको विरुद्धमा साझा संकल्प लिने प्रयत्नका साथ सञ्चालन भइरहेको साताव्यापी अभियान मास्कमाण्डुको आज ‘मास्कमाण्डु हैन हामीलाई काठमाडौँ चाहिन्छ’ भन्दै समापन गरिएको छ । प्रणय दिवसका अवसरमा ‘म मेरो फोक्सोलाई माया गर्छु’ भन्ने मुख्य नारा रहेको कार्यक्रममा हजार जनाभन्दा बढी युवा, विद्यार्थी, सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । मास्कमाण्डु एक र दुई पश्चात वायुको गुणस्तरमा सुधारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था भएता..
नेपालीको खानामा प्रोटिनको अभाव :विज्ञहरुको भनाई
मंगलवार, फागुन १, २०७४ साल
चितवन, १ फागुन । नेपालीहरुले खाने खानामा प्रोटिनको अभाव रहेको यहाँ आयोजित एक कार्यशालाका वक्ताले बताएका छन् । नेपाल पोल्ट्री महासंघ, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन तथा अमेरिकी सोयाबिन एक्सपोर्ट काउन्सिलले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सबैका लागि प्रोटिन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी विज्ञले नेपाली खानामा प्रोटिनको कमी हुँदै आएको जनाएका हुन् । जनचेतनाको कमीका कारण दैनिक खाने खानामा प्रोटिनको मात्रा मापन गर्न..
पाल्पामा प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारवादीहरुले दिए जोड
पाल्पा, २९ माघ । यहाँका अधिकारवादी संस्थाले निःशुल्क प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, स्वास्थ्य सीपमूलक शैक्षिक विकास केन्द्र, जिल्लास्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूह, इन्सेक र शान्तिका लागि साझा अभियानलगायतका संस्थाले जिल्लाका अस्पतालबाट सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने सबै स्वास्थ्य अधिकार पूर्णरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने मागसहित जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सञ्जालका..
दमको रोग के हो ? दमका रोगीले कस्ता खानेकुरा खाने ?
दमको रोग एक श्वास प्रश्वाससित सम्बन्धित रोग हो । दमको रोगलाई अंग्रेजीमा आस्थमा भनिन्छ । वातावरणीय प्रदुषण, धुवाँ धुलो, चिसो तथा फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणबाट हुने विभिन्न एलर्जीका कारण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई आस्थमा हुन सक्दछ । यदि कसैलाई एलर्जी छ र त्यो लामो समयसम्म रहृयो भने मानिसलाई आस्थमा हुने गर्दछ । आस्थमामा श्वास प्रश्वासका कोषिकाहरुले एक प्रकारको..
सप्तरीमा 'निःशुल्क प्रसूति सेवा' पाउनुपर्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण
राजविराज, २६ माघ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने पाँचसूत्रीय माग राख्दै जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तीजन्य नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, सप्तरीका संयोजक पार्थो सरकारको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतलाई गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउन नसकेकाले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत..
महोत्तरीको बर्दिबासमा नेता पोखरेलले गरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ
महोत्तरी, २५ माघ । स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्नका लागि अस्पताललाई व्यवस्थित गरिनु आवश्यक रहेको पूर्व स्वस्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । आज विहिबार महोत्तरीको बर्दिबासमा जिल्लाको स्वास्थ्य बीमा दर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री पोखरेलले अहिले अधिकांश अस्पतालमा पूर्वाधार एवं जनशक्तिको अभाव रहेको सन्दर्भमा देशभरि नै स्थानीय तहद्वारा सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि अस्पताललाई व्यवस्थित..
भोजपुरमा सरकारी स्वास्थ्य बीमा गर्न हौसिए स्थानिय सर्वसाधारण
बुधबार, माघ २४, २०७४ साल
भोजपुर, २४ माघ । स्वास्थ्य बीमाप्रति भोजपुरका स्थानीयवासी हौसिएका छन् । छोटो समयमा नै दुई हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराइसकेको बीमा बोर्डका जिल्ला संयोजक नवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । भोजपुरका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा हालसम्म दुई हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म पौवादुम्मा गाउँपालिकाबाट ३५ घरपरिवारका १५६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् भने रामप्रसाद गाउँपालिकाका..
पूर्वी रुकुममा पखालाका कारण तीन महिनाकी बालिकाको मृत्यु
रुकुम, २४ माघ । रुकुम पूर्वमा तीन महिनाकी एक बालिकाको पखालाका कारण मृत्यु भएको छ । जिल्लाको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१० तकसेराका श्यामबहादुर विककी तीन महिनाकी छोरीको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुकुम पूर्वले जानकारी दिएको छ । केही समय पहिले यहाँ हिमपात भएपछि अत्यधिक चिसोका कारण पाँच दिनसम्म लगतार पखाला चलेर बालिकाको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, रुकुम पूर्वका जनस्वास्थ्य अधिकृत शिव सार्कीले जानकारी..
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्यचौकीमा २४ घण्टे ‘बर्थिङ सेण्टर’
फलेवास पर्वत, २३ माघ । महाशिला गाउँपालिकामा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थामा चौबीसघण्टे गर्भवती र सुत्केरी सेवा विस्तार भएको छ । गाउँपालिकाका छ वटै वडामा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा सो सेवा नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न थालिएको हो । गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं ५ लुखुदेउरालीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लामो समयदेखि सो सेवा सञ्चालनमा आए पनि अन्य पाँच स्वास्थ्यचौकीमा भने यस वर्षदेखि सो सेवा थप गरिएको हो । स्थानीय..
ललितपुरको आनन्दवन अस्पतालमा कुष्ठरोगीको संख्या क्रमिक बढ्दै
ललितपुर, २३ माघ । गोदावरी नगरपालिकाको लेलेस्थित आनन्दवन अस्पतालमा कुष्ठरोगको उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बर्षेनी बढिरेहको छ । बहिरङ्ग र भर्ना भएका बिरामीको संख्या बढिरहेको अस्पतालका तालीम संयोजक गोपाल पोखरेलले बताउनुभयो । अस्पतालको पछिल्लो पाँच वर्षको बिरामीको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा सात हजार पाँच बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिएका छन् । सन् २०१३ मा पाँच हजार ३८१..
सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाजुरामा पनि शुरु
बाजुरा, २२ माघ (रासस) । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा बाजुरामा पनि सञ्चालन हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको समन्वय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको आयोजनामा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न थालिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले जानकारी दिए । जिल्लामा रहेका विपन्न, अति गरिब, सीमान्तकृत, पिछडिएका वर्गको स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पुग्ने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका संयोजक भरत बोहराले..
म्याग्दीको धौलागिरिका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव, खरिदमा अलमल
म्याग्दी, २२ माघ। धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव देखिएको छ । विगत एक वर्षदेखि सरकारी तवरवाट जाने निःशुल्क औषधिहरु उपलब्ध नहुँदा औषधिको अभाव देखिन थालेको हो । यस स्वास्थ्य चौकीमा अहिले कदम म्याग्दीमार्फत गुड नेवर्स इन्टरनेशनलले दिएको औषधि मात्रै बाँकी रहेको वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए । गुर्जामा मात्रै होइन जिल्लाका अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि पर्याप्त औषधि छैन..
सिरहाको लहानमा निःशुल्क शिविर, ४१० जनाले गराए स्वास्थ्य जाँच
लहान, २२ माघ । सिरहाको लहान–१७ देवीदहमा सम्पन्न एकदिने निःशुल्क स्वस्थ्य शिविरमा ४१० जनाले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् । ओम पोली क्लिनिक एण्ड अर्थो केयर सेन्टर लहानको सहकार्यमा अर्किड मेडिकल फाउन्डेशन जनकपुरले आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा विभिन्न रोगबाट पीडित ४१० जनाले निःशुल्क चेकजाँच गराएका छन् । शिविरमा हाडजोर्नी तथा नसा रोग, नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी रोग, छाला तथा यौन रोगका बिरामीले निःशुल्क चेकजाँच..
आज विश्व क्यान्सर दिवस जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरि मनाइदै
काठमाडौं, २१ माघ । आज विश्व क्यान्सर दिवस, हामी सक्छौं, म सक्छु भन्ने नाराका साथ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदैछ । क्यान्सर रोगबारे जनचेतना जगाउने उदेश्यले प्रत्येक वर्षको फेब्रुवरी ४ तारीखमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि आज विभिन्न जनचेतानमुलक कार्यक्रमहरु हुदैछन् । क्यान्सर रोगका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले आज अन्तर्राक्रिया, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम गर्दैछन् । विश्वमा हुने..
भक्तपुरमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न अभियान, साढे ११ लाख संकलन
भक्तपुर, २१ माघ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नगरकोट उपशाखाको एम्बुलेन्स खरिद सहयोग संकलन अभियानमा करिब रु साढे ११ लाख संकलन भएको छ । यसअघि सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि उपशाखाले नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न शुरु गरेको सहयोग अभियानअन्तर्गत विभिन्न दाता एवम् संघसंस्थाबाट रु ११ लाख ४१ हजार ५०० संकलन भएको उपशाखाका सभापति सोम शर्मा बजगाईंले जानकारी दिए । सहयोग प्रदान गर्नेमा युवा बचत तथा ऋण..
स्वास्थ्य चेतनाको अभावमा दुर्गम गाउँमा बढ्दैछन् आँखाका बिरामी
शुक्रबार, माघ १९, २०७४ साल
जाजरकोट, १९ माघ । यस जिल्लामा उमेर ढल्केका मात्र होइन, कलिलै उमेरका व्यक्तिमा पनि आँखाको समस्या बढी रहेको पाइएको छ । महिनैपिच्छे हुने आँखा शिविरमा ३०० भन्दा बढीले आँखाको उपचार गराएको तथ्यांक रहेको छ । सदरमुकामभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासीमा आँखाको समस्या बढी रहेको पाइएको हो । नलगाड नगरपालिकाले तीन महिनायता गरेको आँखा शिविरमा महिनैपिच्छे ३०० भन्दा बढी आँखाका बिरामीले उपचार गराएका छन्..
झापामा गएको तीन आर्थिक वर्षमा कडा खालको रोगीको संख्यामा वृद्धि
भद्रपुर, १८ माघ। झापामा गएको तीन आवको लेखाजोखा गर्दा मानिसमा हुने कडा खालको रोगको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार आव २०७०-७१ मा मिर्गौला पीडित ५२ जना, मुटुरोगी ७७ जना र अर्बुद रोगी १८३ जना देखिए भने आव २०७१-७२ मा मुटु रोगी १२० जना, मिर्गौला रोगी ६५ जना र अर्बुद रोगी २३३ जनाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट..
गलगाड निवारणका लागि एक महिनासम्म आयोडिन महिना मनाइने
काठमाडौँ, १८ माघ । आयोडिनयुक्त नूनको थप प्रवद्र्धन गर्दै यसको कमीबाट हुने रोगलाई निवारण गर्ने ध्येयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले भोलि शुक्रबारदेखि एक महिनासम्मअर्थात फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन महिनाका रुपमा मनाउने भएको छ । सन् १९९८ देखि सो महिनालाई आयोडिन महिनाका रुपमा मनाउँदै आइएको छ । चिकित्सकका अनुसार खासगरी आयोडिनको कमीले गलगाड हुने गर्दछ । लामो समयदेखि सरकारले नूनमा आवश्यक मात्रामा आयोडिन मिलाई कर्पाेरेशनमार्फत देशभरि नै..
ठेलागाडामा राखिएका चटपटे र पानीपुरी खानुहुन्छ ? सावधान !
काठमाडौं, माघ १७ । सडकपेटीमा ठेलागाडामा राखिएका चटपटे र पानीपुरी पसलमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा त्यस्ता पसलहरुमा चटपटे र पानीपुरी बनाउँदा त्यसमा स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पार्ने खालको हानिकारक तेलको प्रयोग गरेको पाइएको हो । विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको नेतृत्वमा मंगलबार गएको बजार अनुगमन टोलीले चाबहिलस्थित धोविखोलानजिक एक कवाडी पसलबाट दूषित र हानिकारक तेल..
इलाममा नगरपालिकाको सुत्केरी प्याकेजबाट २२ महिला लाभान्वित
मंगलवार, माघ १६, २०७४ साल
इलाम, १६ माघ । इलाम नगरपालिकाले चालू आवको छ महिनाको अवधिमा २२ जना आमाहरुलाई सुत्केरी सुविधा प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । सुत्केरी सुविधाको प्याकेजमा एक किलोग्राम घ्यू, एक पावा ज्वानो, एक किलोग्राम सखर, एक किलोग्राम मिश्री, सुत्केरी आमा र बच्चाको लागि एक-एक थान ब्ल्याङ्केटसहित रु दुई हजार बराबरको जिन्सी सामग्री उपलब्ध गराइएको प्रशासकीय अधिकृत शाहले जानकारी दिए । प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत आव २०७४÷०७५..
स्थापनाको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा चिकित्सक अभाव
सोमबार, माघ १५, २०७४ साल
डडेल्धुरा, १५ माघ । उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराको स्थापना भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको भए पनि हालसम्म जम्मा तीनजना मात्रै विशेषज्ञ डाक्टर रहेका छन् । अस्पतालमा भएका डाक्टर पनि बढी समय बिदामा रहने गर्दा उपचारमा झनै समस्या हुने गरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा डडेल्धुरासहित ७ नं..
रुपन्देहीमा चार महिनामा ३४ जना नयाँ कुष्टरोगका बिरामी फेला, १३ महिला
रुपन्देही, माघ १४ । रुपन्देहीमा चार महिनामा कुष्टरोगका ३४ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन । ति मध्ये १३ जना महिला रहेका छन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका क्षयकुष्ट निरीक्षक टिकाराम अधिकारीका अनुसार कार्तिक मसान्त सम्म ३४ कुष्ट रोगका नयाँ बिरामी फेला परेका हुन । गत आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा १ सय २२ जना कुष्ट रोगका विरामी फेला परेका थिए । गत..
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती थपिँदो, वर्षेनी तीन हजार नयाँ कुष्ठरोगी
ललितपुर, १४ माघ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० सम्ममा कुष्ठरोगरहित विश्वको योजना लिएर अघि बढे पनि नेपालमा वर्षेनी करिब तीन हजार नयाँ बिरामी देखा परिरहेका छन् । यस वर्षमात्रै तीन हजार २१५ नयाँ रोगी पत्ता लागेका छन् । संगठनका सदस्य राष्ट्रले कुष्ठरोगी घटाउनुपर्नेमा झनै बढिरहेको छ । सन् २०१० (विसं २०५७ तिर) मा नेपाल सरकारले कुष्ठरोग उन्मूलनको घोषणा गरे पनि नयाँ बिरामीको..
आर्थिक अभावले आठ महिनादेखि अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा ठप्प
फलेवास, पर्वत, १४ माघ। विगत आठ महिनादेखि बिरामी बोक्ने जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स बिग्रँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा रहेको एक मात्र एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि बिरामी ओसारपसारमा समस्या भएको छ । विगत आठ महिनाअघि देखि एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएको छ । ५ वर्षअगाडि खरिद गरिएको एम्बुलेन्सका पाटपुर्जा बिग्रिएपछि आठ महिनादेखि मर्मतका लागि पोखरामा लगेर छाडिएको अस्पतालले जनाएको छ । पोखरास्थित सृजना अटो वर्कसपमा लगिएको..
स्वास्थ्य चेतनाको वृध्दि : झापामा कुपोषित बालबालिकालाई पोषणयुक्त लिटो
शुक्रबार, माघ १२, २०७४ साल
भद्रपुर, १२ माघ । तीनवटा नगरपालिकाबाहेक झापाका सबै स्थानीय निकाय पूर्ण खोपयुक्त भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको झापामा गाउँपालिका सबै पूर्णखोप घोषणा भइसकेको र नगरपालिकामा विर्तामोड, दमक र मेचीनगर नगरपालिका मात्र घोषणा हुन बाँकी रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मधुसुदन कोइरालाले बताए । झापाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषणयुक्त तयारी लिटो खुवाउने कार्यक्रम..
पाल्पाका ५९ वटा स्वास्थ्य संस्था स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण
रामपुर, पाल्पा, ११ माघ : पाल्पामा ५९ वटा स्वास्थ्य संस्था स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतमा सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । जिल्लाको रामपुर र तानसेन नगरपालिकासँगै निस्दी गाउँपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, माथागढी गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, तिनाहुँ गाउँपालिका र रम्भा गाउँपालिकामा गरी ५९ वटा स्वास्थ्य संस्था..
आँखा बैंक स्थापनाको लागी 'बेलायतबासी नेपालीहरु' बाट सहयोग जुट्दै
चितवन, १० माघ । बेलायतमा रहेका चितवनवासीले जिल्लामा विपत् र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । सन् २००४ मा चितवन ‘एड ट्रस्ट युके’ नामक संस्था गठन गरी उनीहरुले जिल्लामा सहयोग थालेका हुन् । पछिल्लोपटक नेपाल नेत्रज्योति संघ चितवनलाई भरतपुर आँखा अस्पतालमा आँखा बैंक स्थापनाका लागि उनीहरुले सहयोग गरेका छन् । ट्रष्टका संस्थापक अध्यक्ष कपिल श्रेष्ठका अनुसार आँखा बैंक स्थापनाका लागि १० हजार..
Results 1362: You are at page 42 of 46
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Next Last